9 Sare ee Deeqda Dugsiga Sare ee Kaatooligga ee Ardayda 2022
Maqaalkani, waxaan diyaarinnay liis casriyeysan oo ah deeqaha waxbarasho ee dugsiga sare ee katooliga ah ee adduunka. Marka, haddii aad tahay arday katoolikat dugsiga sare ah waad ku boodi kartaa deeqdan waxbarasho oo waxaad ku raaxeysan kartaa faa'iidooyinka waxbarashada bilaashka ah ama waxbarashada qiimo aad u kab ah.
Sida ay jiraan iskuulo sare oo dowladeed ama kuwa dowladeed iyo kuwa gaar loo leeyahayba, sidoo kale waxaa jira iskoollo katolik iyo kuwo kale oo diineed ku saleysan iyo machadyo sare. Maaddaama maqaalkani uu si cad uga hadlayo dugsiyada sare ee katooliga, looma baahna in laga hadlo kuwa kale.
Mashruucan waxaa loogu talagalay ardayda horeyba uga diiwaangashan dugsiga sare ee katooliga ama raba inay midkood iska diiwaangeliyaan. Iyada oo loo marayo qoraalkan blog-ka ah, waxaad ku baraarujineysaa waxyaabaha soo socda;
Dugsiyada sare ee katooliga ahi waxay ardayda siiyaan deeqo waxbarasho iyo sidoo kale dugsiyada sare ee dawliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay
wax ka baro iskuulada sare ee katooliga ah ee bixiya deeqaha waxbarasho si ay kuugu fududaato gelitaanka dugsiyadan
Ururada samafalka ama aasaaska bixiya deeqdan waxbarasho iskuulada sare ee katooliga
Kuwani iyo in ka badanba waa waxyaabaha aad ka baran lahayd qoraalkan, ee fadhiga si fiican u aqriso!
Sideen ku heli karaa kaalmo dhaqaale dugsiga sare ee katooliga?
Dugsiyada sare ee katooliggu ma bixiyaan deeqo waxbarasho?
Maxay yihiin shuruudaha loogu talagalay deeqaha waxbarasho ee dugsiga sare ee catholic?
Top Deeqaha Dugsiga Sare ee Katooliga
Kaaliyaha Katooliga Dhaqaalaha ee Dugsiga Sare ee Dugsiga Sare
John W. McDevitt (Darajada Afraad) Deeq waxbarasho
Deeqda waxbarasho ee Lucile Murray Durkin
Del Papa-Grimaldi-Gabriele Deeqda Sanduuqa Dhaqaalaha
Deeqda Wendell Scholarship
Wilanna K. Robinson Fund Fund
Deeqda Aasaasiga Bulshada Katooliga
Deeqda Qaranka ee CCAA
Deeqda Isbahaysiga Mudanayaasha Kaatooligga ee Koowaad
Dr. Wilanna K. Sanduuqa deeqda waxbarasho ee Robinson
Ururka Haweenka Katooliga Slovak ee Koowaad
Gargaarka dhaqaale waxaa bixiya iskuulada sare ee katooliga si ardayda looga caawiyo khidmadaha wax lagu barto. Si aad uga hesho gargaarka dhaqaale iskuul katoolik ah, ardaydu waa inay kahelaan arjiga gargaarka deeqaha xafiiska gargaarka dhaqaalaha ee dugsiga sare ama waxay sameyn karaan codsi khadka tooska ah ah haddii iskuulku mid leeyahay.
Dugsiyada sare ee Katooliga waxay siinayaan deeq waxbarasho ardayda tixgelinaysa nooca waxbarashada laakiin aan awoodin dhaqaale ahaan. Codsiga deeqaha waxbarasho waxaa lagu sameyn karaa xafiiska gelitaanka ee iskuulka aad doorbidayso ama khadka tooska ah ayaa laga heli karaa.
Si aad ugu qalanto deeqaha waxbarasho ee dugsiga sare ee katooliga, ardaydu waa inay codsadaan gelitaanka dugsigooda ay doorteen oo la aqbalo. Ardaydu waa inay sidoo kale buuxiyaan baahida dhaqaale iyo shuruudaha goobta ee dugsigu dejiyay.
Xaqiiqdii waxaa jira tiro badan oo deeqo waxbarasho oo loogu talagalay Masiixiyiinta guud ahaan, dhammaantoodna waan ognahay in iimaanka Masiixiyiinta uu ka kooban yahay diimo kala duwan.
Caqiidada katooliga waa mid ka mid ah madaahibta waxayna sidoo kale bixisaa fursado deeq waxbarasho oo u gaar ah dadka ku dhaqma caqiidadan.
Sida ay jiraan deeqo waxbarasho oo loogu talagalay ardayda dugsiga sare ee katooliga, sidoo kale waxaa jira ardayda jaamacadaha iyo kuleejka. Qoraalkan aad hadda akhrinaysid waxaa loogu talagalay ardayda dhigata dugsiga sare waxaanan diyaarin doonnaa midka ardayda jaamacadda goor dambe.
Kuwani deeqaha waxbarasho ee dugsiga sare ee Katooliga ah waxaa loogu talagalay inay kaa caawiyaan inaad ku guuleysato riyadaada kuleejka iyo halkan, waxaan soo uruurinnay deeqaha waxbarasho ee dugsiga sare ee catholic.
Hoos waxaa ku yaal faahfaahinta liistada deeqaha waxbarasho ee dugsiga sare ee kaatooliga ah ee kor ku xusan, halkanna waxaad ku ogaan doontaa sida deeqaha waxbarasho ee kaatooliggu u shaqeeyaan oo u helaan xiriiriyeyaal aad ku dalbato
Katooliga United Financial waa aasaas ama urur maalgeliya waxbarashada ardayda dugsiga sare ee raba inay galaan kuleejka ama jaamacadda. Ururku wuxuu shaqeynayay ilaa 1995 tan iyo markaas wuxuu bixiyay deeqo waxbarasho oo ka badan 3 milyan oo doolar.
Catholic United waxaa loo aasaasay inay ka caawiso xubnaha da 'kasta oo doonaya inay bartaan xirfad, kasbadaan shahaado ama dhammaystiraan shahaadada kulliyadda. Deeqda ayaa sidoo kale loo kordhiyay kuwa aan Katoolikada ahayn iyo inaad xaq u yeelatid deeqda waxbarasho, ama Kaatoolig ama kaatoolig ahaan, waa inaad xubin ka noqotaa Katooliga Maaliyadeed ee Dhaqaalaha adoo leh mid ka mid ah alaabteeda maaliyadeed.
Deeqdani waxay u qalantaa $ 500 Katooliga iyo $ 300 kuwa aan Katoolikada ahayn, dalabka waxaa lagu sameeyaa khadka tooska ah waana awoodaa hadda codso
Tani waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee dugsiga sare ee katooliga ah ee aad u baahan karto inaad u dalbato kaatoolig ahaan oo aad ugu raaxeysato maalgalinta waxbarasho ama xirfadeed. Si aad ugu qalanto deeqdan waxbarasho, waalidkaa (iintaada) waa inuu xubin ka noqdaa Knights of Columbus.
Codsadayaasha xiisaha lihi waa inay sidoo kale galaan sanadkooda koowaad kulleejada katooligga ama jaamacadda ay doortaan si ay u helaan deeqdan waxbarasho. Deeqdani waxay u dhigantaa $ 1,500 ardaykiiba oo lagu abaalmariyaa iyada oo ku saleysan mudnaanta tacliimeed, taasi waa, waa inaad leedahay waxqabad tacliimeed oo heer sare ah.
Halkan ka eeg waqtiga kama dambaysta ah iyo arjiga.
Deeqda Lucile Murray Durkin ee loogu talagalay Haweenka Garanaya Wadaadnimada Sharciga waa mid kale oo ka mid ah deeqaha waxbarasho ee dugsiga sare ee catholic gaarahaan haweenka iyo shakhsiyaadka aan binary-ka ahayn oo ujeedkoodu yahay inay noqdaan wadaaddo katoolik ah. Waxay sidoo kale u furan tahay kuwa doonaya wadaadnimada diimaha kale.
Ka dib marka loo baahan yahay shuruudaha kor ku xusan waa in la buuxiyaa, codsadayaashu waxay soo gudbin doonaan qoraal ah 2,000 illaa 2,500 oo erey ah oo ka jawaabaya mid ama in ka badan oo ka mid ah dardargelinta la siiyay iyo sidoo kale laba warqadood oo talo bixin ah. Deeqdani waxay abaalmarin $ 2,200 siisaa guuleystayaasha la xushay, haddii aad xiiseyneyso waad awoodaa bilow adiga Codsiga halkan
Markaad ka hadlaysid deeqaha waxbarasho ee dugsiga sare ee katooliga ah, Del Papa-Grimaldi-Gabriele Deeqda Sanduuqa Dhaqaalaha lagama tagi karo. Deeqdan waxbarasho waxaa maalgeliya Ste Steen for Ololaha Berrito waxaana lagu bartilmaameedsanayaa waayeelka dugsiga sare ee hadda jira ama kuwa cusub ee kuleejka ah ee deggan Archdiocese of Detroit oo doonaya inay iska diiwaangeliyaan kulliyad ama jaamacad.
Muddada kaalmaynta deeqdani waa illaa hal sano oo u dhiganta $ 2,000 oo si toos ah loogu bixiyo iskuulka ardaygu doorto. Halkan ka eeg waqtiga kama dambaysta ah iyo arjiga.
Tani waa deeq waxbarasho oo loogu talagalay waayeelka dugsiga sare kuwaas oo ah gabdho keli ah oo hooyooyinka keligood ah oo xubno ka ah kaniisadda Archdiocese ee Detroit waxayna qorsheynayaan inay galaan kulleejo ama jaamacad waqti-buuxa ah sannad-dugsiyeedka hadda socda.
Abaalmarintan ayaa ah tan ugu qiimaha badan liiskan deeqaha waxbarasho ee dugsiga sare ee catholic ee $ 4000 arday kasta oo si toos ah loogu bixiyo dugsiga. Waxaad bilaabi kartaa arjigaaga internetka halkan.
Tani waa $ 500 deeq waxbarasho oo loogu talagalay waayeelka dugsiga sare ee dhowaan la dhigey kulliyad la aqoonsan yahay ama jaamacad. Abaalmarintu waxay bartilmaameed u tahay Katooliga iyo kuwa aan Katooligaba ahayn, waxa keliya ee looga baahan yahay waa in codsaduhu uu xubin firfircoon ka ahaadaa machad ku saleysan caqiido oo uu leeyahay GPA ee 3.0 miisaanka 4.0.
Shuruudda kale waxaa ka mid ah degganaanshaha gobolka Michigan oo leh ku lug lahaanshaha bulshada. Codsiga waxaa lagu sameeyaa khadka tooska ah waana bilaabi kartaa halkan.
Mu'asasadani waxay leedahay deeqo waxbarasho oo kaladuwan oo loogu talagalay inay ka caawiso maalgalinta waxbarashada ardayda ee ka faa'iideysanaya ardayda laga bilaabo dugsiga sare ilaa heer jaamacadeed ee waxbarasho. Sababtoo ah waxaa jira deeqo waxbarasho oo kala duwan oo lagu bixiyo ururkan, waqtigooda ugu dambeeya, shuruudaha, iyo qiimaha lacageed dhammaantood way kala duwan yihiin.
Codsadeyaashu waa inay ahaadaan Katoolig ama ku dhaqmaan caqiido masiixi ah oo firfircoon kaniisaddooda iyo bulshooyinka kala duwan. Ku Aasaaska Bulshada Katooliga waxay leedahay qaar ka mid ah deeqaha waxbarasho ee dugsiga sare ee catholic.
Tani waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee dugsiga sare ee katooliga ah ee lala beegsado waayeelka ku xiran kuleejka iyo bedelka ardayda, abaalmarinta waxaa la siiyaa sanad walba ardayda ku jirta qaybtaan. Si loogu tixgeliyo deeqda waxbarasho ee 'National CCAA', codsadayaashu waa inay buuxiyaan shuruudaha soo socda;
Codsadayaasha waa in loo aqbalaa hal ama in kabadan hay'adaha xubinimada Qaranka ee CCAA.
Waa inuu dhammaystiray dugsiga sare ama sannadkiisii ​​ugu dambeeyay
Waa inuu iska diiwaangeliyaa hay'ad xubin ka ah National CCAA oo bilaabata deyrta
Ku bilow Codsiga deeqda waxbarasho ee CCAA ee Qaranka iyo inaad fursad u hesho helitaanka deeq waxbarasho oo kaa arki doonta kuleejka.
The FCSLA waxay bixisaa abaalmarin deeq waxbarasho oo sanadle ah oo ka badan $ 287,000, oo la siiyo xubnaha dhallinyarada ee ururka. Qofka qaata abaalmarintan waxaa doorta guddi garsoorayaal aan eex lahayn oo ka socda goobta waxbarashada iyadoo lagu saleynayo waxqabadka akadeemiyadeed ee ardayga, qiimaha kaniisadda / adeegga bulshada, iyo kaqeybgalka dugsiga / qoraalka.
Shuruudaha kale ee u-qalmitaanka ayaa ah in codsadayaashu ay xubin ka yihiin xiriir wanaagsan Ururka ugu yaraan saddex sano ka hor taariikhda arjiga. Deeqda waxbarasho waxay kuxirantahay nooca deeqda waxbarasho ee aad codsaneyso. Qeybaha kala duwan ayaa kala ah;
Codsiga deeqda waxbarasho ee kulleejada iyo qalin-jabinta
Codsi waxbarasho xirfadeed / farsamo / ganacsi
Codsiga deeqda waxbarasho ee dugsiga sare
Codsiga deeqda waxbarasho ee dugsiga hoose
Codsiga deeqda waxbarasho ee dugsiga hoose ee hore
Seminary ama diaconate ama codsiga nolosha diinta
Kuwani waa deeqaha waxbarasho ee dugsiga sare ee katooliga ah, si taxaddar leh u akhri si aanad u seegin faahfaahin muhiim ah maadaama ay kaa caawin doonaan, ilmahaaga ama walaalahaaga inay xakameeyaan kharashka iskuulada catholic-ga iyo in qaar ka mid ah deeqaha waxbarasho ay sii socdaan si ay u arkaan iyaga oo maraya kulliyad iyo jaamacad.
Mid kasta oo ka mid ah shuruudaha u-qalmitaanka deeq-waxbarasho wuu ka duwan yahay, wakhti dheeri ah ku sii akhri iyaga oo ha sameyn wax khaladaad ah ama ha ku qasin. Waxa kale oo aad la xiriiri kartaa hay'adda martida loo yahay si aad u sii caddeyso oo aad wax uga ogaato shuruudaha kale ee aan halkan ku taxnayn.
27 Koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah ee loogu talagalay dhalinyarada 13-19
9 Top Online Free & Seminary Degrees Wasaaradda Sare & Darajooyinka Seminary
deeqaha waxbarasho ee dugsiga sare ee catholicdeeqaha waxbarasho ee dugsiga sare
Previous Post:13 Koorsooyinka Tababarka Tooska ah ee Ardayda iyo Shaqaalaha
Post Next:15 Darajooyinka ugu Qiimaha badan Kanada